ktmkhabar.com - अपेनले गर्यो ‘डाइनामिक लिडर अवार्ड’को घोषणा
१० हजार ७०३ कोरोना संक्रमित थपिए, ३ को मृत्यु
सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नगर्न यातायात व्यवसायीको माग
भारतमा एकैदिन करिब साढे ३ लाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सार्वजनिक सेवा लिन आजदेखि खोप कार्ड अनिवार्य, कार्ड हराएको भए यसो गर्नुस्
अपेनले गर्यो ‘डाइनामिक लिडर अवार्ड’को घोषणा
बिहिबार, पुष १५ २०७८
प्रि–स्कुलहरु छाता संगठन एसोसिएशसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले डाइनामिक लिडर अवार्ड आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मन्टेश्वरी विद्यालयहरुको हौसला बढाउन अपेन डाइनामिक लिडर अवार्ड–२०२१ को आयोजना गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा केन्द्रीय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यही पुष २४ गते भृकुटीमडण्डपस्थित् नेपाल टुरिजम बोर्डमा उक्त अवार्ड कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले अपेन मन्टेशरी र बालबालिकासँग सम्बन्धित व्यक्ति र क्षेत्रको साझा संगठन भएको बताए । उनले कोरोना महामारीले बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने संस्थाहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष दाहालले महामारीको अवस्थामा राज्यले प्रि–स्कुललाई कतैबाट पनि सहयोग नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
उनले विशेषगरि यो क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरु ९० प्रतिशत रहेको बताए । ५० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको मन्टेश्वरीमा लगानी भएको पनि सुनाए । देशभरि अहिले कानुनबमोजिम ५ हजार प्रि–स्कुल सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताए ।
कोरोना महामारीमा धान्न नसेकेर धेरै प्रि–स्कुल बन्द भएको जानकारी दिँदै दाहालले जसले त्यस्तो अवस्थामा पनि संचालन गरेका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप सम्मान गर्न अवार्ड वितरण गर्न लागेको बताए ।
उनले भने,‘बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा विनाशर्त सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । बालमैत्रीहरु, शिक्षा लगानीकर्ताहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने बातावरण सिर्जना सरकारले गरिदिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका केन्द्रीय सचिव उमानाथ निरौलाले अपेन सम्पुर्ण इसीडी पुर्व प्राथमिक विद्यालय तथा किन्डरगार्डेन मन्टेश्वरीको हकहितको निम्ति स्थापना भएको बताए । संगठनमा रही ५ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका निरौलाले पोस्ट कोभिडबाट सबैभन्दा धेरै मारमा प्रि–स्कुल परेको सुनाए । महामारीको कारण धेरै प्रि–स्कुल बन्द भएको बताउँदै प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्कुल सञ्चालन गर्ने ३ सय स्कुलका प्रिन्सीपलहरुलाई हौसलास्वरुप अवार्ड वितरण गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
अवार्ड वितरणको लागि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गरिने जनाइएको छ।
केन्द्रिय सदस्य कमला अधिकारीले अपेन डाइनामिक भनेको महिलाहरुले नेतृत्व गर्ने संस्था भएको बताईन् । आजसम्म उनले राज्यबाट अपेनलाई कुनै पनि सहयोग नगरेको सुनाइन् । प्रि–स्कुल चलाउदै गर्दा कोभिडले बर्बाद पारेको उनको भनाई थियो । अभिभावकहरुले कुरा नबुझ्नेमा महिलाहरुको चाँही विश्वास गर्ने उनले बताइन् ।
अपेनकमला अधिकारीबद्रीप्रसाद दाहाल
खारेज हुँदै सीटीईभीटी
पूर्वउपकुलपतिहरू भन्छन्- त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्कियो !
प्याब्सन काठमाडौँको सह–सचिवमा कोइरालाको उम्मेदवारी, परिणाममुखी प्याब्सन बनाउन दिए दरिलो नारा
महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको आगामी संस्करण नेपालमा
ल्याण्डमार्क एकेडेमीको हर्कत : डर देखाउने नाममा विद्यार्थीको नाङ्गो फोटो खिच्ने गरेको खुलासा !
टेक्ससमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
पशुपति धर्मशालाको होटेलमा मन्त्री आलेको नजर, बतास समूह पशुपतिबाट पनि लखेटिन सक्ने सङ्केत !
धर्मशाला निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले भने- सेभेन स्टार जस्तो रहेछ, म ‘सक्ड’ भएँ